EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ရဲ့သီချင်းကို Cover Song ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ IZ*ONE အဖွဲ့ဝင် Japan မလေး Sakura | News Bar Myanmar
EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ရဲ့သီချင်းကို Cover Song ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ IZ*ONE အဖွဲ့ဝင် Japan မလေး Sakura
IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ Sakura ဟာ သူမရဲ့ 23 နှစ်မြောက်မွေးနေ့လေးမှာ Fan တွေအတွက် လက်ဆောင်ဆိုပြီး EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ရဲ့ သီချင်းကို Cover သီဆိုထားတဲ့ Video လေးကို တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းကတော့ 2019 တုန်းက SM Entertainment ရဲ့ Station3project အတွက် D.O. solo ဆိုခဲ့တဲ့ “That’s Okay” ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းလေးဟာ Idol တော်တော်များများ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ healing song လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Sakura ဟာ Video နဲ့အတူ Message လေးကို ခုလိုတင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ “ဒါလေးဟာ WIZ*ONE တွေအတွက် Sakura ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ Small Gift လေးတခုပါ။
D.O. Sumbaemim ရဲ့ That’s Okay သီချင်းစာသားတွေက ကျွန်မနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် Cover Song ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ သီချင်းဆိုစွမ်းရည် မရင့်ကျက်သေးပေမဲ့ စိတ်နှလုံးသားနှစ်ပြီး သီဆိုထားပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ နားထောင်ပေးကြပါနော်”
Sakura ဟာ IZ*ONE သီချင်းတွေထဲမှာ စာသားရရှိမှု သီဆိုရမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်လို့ Sakura ရဲ့ Japan ပရိသတ်တွေဟာ အဖွဲ့ထဲက ထွက်ဖို့အထိ တိုက်တွန်းခဲ့တာမျိုးတွေ မနှစ်က ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Sakura ကတော့ Bighit Label နဲ့ မကြာသေးခင်က စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီး ရှေ့လျှောက် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လက်တွဲလုပ်ကိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next သမီး​​လေးရဲ့ ​မွေး​နေ့ပွဲကို ဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာ ပြုလုပ်​ပေးခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chen »
Previous « ဒီနှစ်မှာ အသက် ၃၀ ပြည့်တော့မဲ့ Baekhyunee ပြောတဲ့ သူ့ရဲ့အတိတ်နဲ့ အနာဂတ် Plan အကြောင်း